Sefania 3 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yerusalem yɛ atuatew kurow ne kurow a aporɔw (1-7)
Atemmu bɛba wɔn so; wɔbɛsan de wɔn aba (8-20)
Wɔbɛsesa wɔn kasa ama wɔaka kasa kronkronkron bi (9)
Wobegye ahobrɛasefo ne mmɔborɔwafo (12)
Yehowa bedi Sion ho ahurusi (17)
3 Kurow tuatewfo, kurow a ne ho agu fĩ, kurow a ɔyɛ nhyɛso, asɛm ato wo!+ 2 Wantie obiara asɛm,+ na wantie kasakyerɛ.*+ Wamfa ne ho anto Yehowa so;+ wammɛn ne Nyankopɔn.+ 3 Ne mpanyimfo a wɔwɔ ne mu yɛ agyata a wɔbobom.+ N’atemmufo yɛ anadwo mpataku.Wɔwe biribiara; dompe mpo, wonnyaw bi mma ade nkye so. 4 N’adiyifo yɛ dwae,* na nnaadaa ayɛ wɔn ma.+ N’asɔfo gu nneɛma kronkron ho fĩ;+Wɔmfa mmara no nyɛ hwee.+ 5 Yehowa yɛ ɔtreneeni wɔ kurow no mu;+ ɔnyɛ bɔne. Anɔpa biara ɔma wohu n’atemmu.+ Ɛte sɛ adekyee; enni huammɔ. Nanso ɔbɔnefo nnim aniwu.+ 6 “Mesɛee aman, na wɔn ntwea so abantenten yɛɛ pasaa. Mesɛee wɔn akwan, na obiara amfa so. Wɔn nkurow asɛe pasaa; obiara nni mu, na obiara nte hɔ.+ 7 Mekae sɛ, ‘Sɛnea ɛte biara, wubesuro me na woatie kasakyerɛ,’*+ Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔrensɛe ne tenabea.+Mɛtwe n’aso wɔ nea wayɛ nyinaa ho.* Nanso afei koraa na na wɔn ani abere redi bɔne.+ 8 ‘Enti momfa ntoboase ntwɛn me,’*+ Yehowa asɛm ni,Nkosi sɛ mɛsɔre abɛsesaw nneɛma a wɔanya afi ɔko mu,*Efisɛ m’atemmusɛm ne sɛ mɛka aman nyinaa abom, na maboaboa ahenni nyinaa ano.Na mehwie m’abufuw, m’abufuhyew nyinaa agu wɔn so.+Na m’ani a abere sɛ ogya no bɛma asaase no nyinaa ahyew.+ 9 Afei mɛsesa aman no kasa ama wɔaka kasa kronkron bi,*Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nyinaa bɛbɔ Yehowa din,Na ama wɔde baakoyɛ asom no.’*+ 10 Na wɔn a wɔrepa me kyɛw, me nkurɔfo a wɔabɔ wɔn ahwete no babea noDe akyɛde befi Etiopia nsubɔnten ho abrɛ me.+ 11 Saa da no, nneɛma a woyɛ de tew me so atua no,+W’ani renwu wɔ ho bio.Efisɛ meyi ahantanfo a wɔhoahoa wɔn ho no afi wo mu,Na woremma wo ho so bio wɔ me bepɔw kronkron no so.+ 12 Mɛma ahobrɛasefo ne mmɔborɔwafo aka wɔ wo mu,+Na wɔde Yehowa din bɛyɛ wɔn guankɔbea. 13 Israelfo a wɔbɛka no+ renyɛ adebɔne;+Wɔrenni atoro, na wɔrennaadaa nkurɔfo;*Wobedidi na wɔadwudwo wɔn ho, na obiara renhunahuna wɔn.”+ 14 O Sion babea, di ahurusi! O Israel, bɔ ose!+ O Yerusalem babea, ma w’ani nnye na fi wo koma mu nyinaa di ahurusi!+ 15 Yehowa ayi atemmu a etia wo no afi hɔ.+ Wama wo tamfo asan n’akyi.+ Israel hene Yehowa ka wo ho.+ Worensuro amanehunu biara bio.+ 16 Saa da no, wɔbɛka akyerɛ Yerusalem sɛ: “O Sion, nsuro.+ Na mma w’aba mu mmmu.* 17 Yehowa wo Nyankopɔn ka wo ho.+ Ɔyɛ Otumfo, na obegye nkwa. N’ani begye na wadi wo ho ahurusi.+ Ne dɔ nti, ɔbɛyɛ komm.* Na wo nti, ɔde anigye bɛbɔ ose. 18 Wɔn a wonni w’afahyɛ ase nti wɔredi awerɛhow no, mɛboaboa wɔn ano;+Wɔnka wo ho, efisɛ n’animguase da wɔn so.+ 19 Hwɛ! Saa bere no, wɔn a wɔhyɛ wo so nyinaa, me ne wɔn bedi.+Megye nea ɔtɔ gu so no,+Na maka wɔn a wɔahwete no aboa ano.+ Na mɛma nkurɔfo ayi wɔn ayɛ na wɔagye dinWɔ asaase a wɔn anim guu ase wɔ so no nyinaa so. 20 Sɛ meboaboa mo ano saa bere no a,Saa bere no na mede mo bɛba. Na sɛ meboaboa mo nkurɔfo a wɔakyere wɔn kɔ no ano de wɔn brɛ mo a,Mɛma moagye din, na nkurɔfo ayi mo ayɛ+ wɔ asaase sofo nyinaa mu,” Yehowa na waka.+
^ Anaa “nteɛso.”
^ Anaa “N’adiyifo mmu hwee.”
^ Anaa “woagye nteɛso.”
^ Anaa “Mɛma wabu nea wayɛ nyinaa ho akontaa.”
^ Anaa “nhwɛ me kwan.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Nkosi sɛ mɛsɔre sɛ ɔdansefo.”
^ Anaa “kasa bi a wɔmfraa mu.”
^ Anaa “mmati koro asom no.”
^ Anaa “wɔrenhu nnaadaa tɛkrɛma wɔ wɔn anom.”
^ Anaa “mma wo nsam nngow.”
^ Anaa “ne koma bɛtɔ ne yam.”